Ny fanofana fiara ao Sri Lanka ~ Journey-Assist - Torohevitra. Vidin-javatra. Model. Ny polisy
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Sri Lanka » Ny fanofana fiara ao Sri Lanka
Ny fanofana fiara any amin'ireo orinasa iraisam-pirenena
Sofa amin'ny mpaninjara eo an-toerana
Ny fanofa-fiara miaraka amin'ny mpamily
Serivisy fanampiny rehefa manofana fiara
Làlana any Sri Lanka
Fahazoana ny zo vonjimaika ao Sri Lanka
Azonao atao ny manofa fiara avy any amin'ny orinasa iraisam-pirenena toa ny Budget, Sixt, Hertz ary ny sasany hafa ao an-drenivohitra Sri Lanka Colombo na any amin'ny seranam-piaramanidina akaiky azy. Bandaranaike. Ireo orinasa ireo dia tsy mitondra fiara kely fotsiny miaraka amin'ny fivezivezena ambany. Ny fiara rehetra dia ao anatin'ny toe-javatra tsara rehetra.
Ny tahan'ny fanofana fiara ao Sri Lanka
Raha ny vidiny, ohatra, ny fanofa trano fohy kely toa ny Hyundai Grand 10 dia mitentina 9 rupees Sri Lankanina isan'andro ny hofan-trano mandritra ny 000 ka hatramin'ny 1 andro ary 3 rupee amin'ny hofan-trano mandritra ny 5 ka hatramin'ny 600 andro. Ny hofan-trano Hybrid Hyundai Ionik dia mitentina 4 rupiah isan'andro amin'ny hofan-trano mandritra ny 11 ka hatramin'ny 18 andro ary 000 rupe isan'andro mandritra ny 1 ka hatramin'ny 3 andro. Mitentina 11 rupe isan'andro ny fametrahana ny BMW 000 malaza indrindra (mandritra ny 4-11 andro) ary 520 rupe isan'andro, raha 30-000 andro. Amin'izao vanim-potoanan'ny fizahan-tany mavitrika indrindra izao, izay any Sri Lanka dia maharitra hatramin'ny desambra ka hatramin'ny janoary, mitombo 1-3 isan-jato ny sandan'ny orinasa toy izany.
Ireo antontan-taratasy ilaina amin'ny fanofa fiara ao Sri Lanka
Raha manofa fiara ao amin'ny orinasa iraisam-pirenena ianao dia mila pasipaoro, zon'ny iraisam-pirenena ary karatra ara-bola, navoaka tsy maintsy omena an'ilay olona manofa fiara. Ny mpanjifa dia tsy maintsy 23 taona farafaharatsiny ary manana traikefa mitondra fiara farafahakeliny 2 taona.
Mila voasoratra anarana miaraka amin'ny Sri Lankan Automobile Association any Colombo ny zon'olombelona iraisam-pirenena. Rehefa manofa fiara ao amin'ny orinasa iraisampirenena izy dia hamaha ity olana ity ho an'ny mpanjifa. Ny vidin'ny an'io fomba io dia 3 500 rupees Sri Lankanes, rupees 450 hafa no tokony aloa amin'ny orinasa ho fanampiana.
Ny tafiditra ao amin'ny vidin'ny fanofa fiara
Ny vidin'ny hofan-trano dia misy kilaometatra tsy voafetra, fanampiana ara-teknika eny an-dàlana raha ilaina, fiantohana (andraikitra avy amin'ny sivily ary raha misy ny halatra na loza; ny fiantohana farany dia misy fanalavana izay mamaritra ny tompon'andraikitry ny mpamily hatramin'ny 50 ka hatramin'ny 000 Sri Lankan). Azonao atao ny mandoa trano manofa trano iray miaraka amin'ny karatra fotsiny. Amin'ny fotoana hanaterana ilay fiara amin'ny mpanjifa, dia misy antoka antoka voasakana amin'ny karatra ao aminy, ny habetsany izay mifanentana amin'ny salanisa. Ho atao ilay izy rehefa avy nanofa ny fiara ny mpanjifa, raha toa ka tsy misy fanitsakitsahana fifanarahana momba azy.
Ny fanofana fiara any amin'ireo mpivarotra eo an-toerana
Ireo orinasa manofa trano any Sri Lankan (Shineway, Malkey, SR Rent a Car, Queens Rentals, Cause, sns) dia mirehareha amin'ny vidiny ambany kokoa raha oharina amin'ireo manerantany. Amin'ny lafiny iray, ireo fiara atolotra azy ireo dia matetika dia lava be ny kilaometatra (matetika mihoatra ny 100 000 km). Ny biraon'ny orinasa tahaka izany dia any amin'ny tanàn-dehibe rehetra ao amin'ny firenena. Ny ankamaroan'izy ireo dia ao Colombo sy Galle. Ho an'ny fandoavambola sasany, alefa any amin'ny seranam-piaramanidina na amin'ny adiresy hafa ny fiara.
Ahoana ny fomba hikarakarana ny fanofana fiara
Raha te handefa fiara ianao dia tsy maintsy mameno ny endrika mety amin'ny tranokalan'ny orinasa. Ho valin'izany, dia halefa ianao ny antony manofa trano sy ny vidiny. Mba hanamafisana ny famandrihana dia tsy maintsy manome ny zon'ny zonao amin'ny fenitra iraisam-pirenena sy pasipaoro ianao, ary koa mandoa vola mialoha an'i Sri Lankan. Tokony ho tsaroana fa rehefa nofoanana ny famandrihana efa vita na raha tsy hiseho ny mpanjifa dia tsy averina aminy io vola io.
Ny fiara manofa fiara Toyota Prius amin'ny orinasa Sri Lankan dia mitentina 5 rupe isan'andro mandritra ny 800-1 andro sy 3 rupe isan'andro mandritra ny 3-600 andro. Manofa kamiao Toyota Rush - 4 11 sy 9 600 rupe isan'andro. Ny fiara tsirairay dia manana fiantohana amin'ny halatra sy ny lozam-pifamoivoizana. Ny tahiry fiarovana dia arotsaka amin'ny vola 6 ka hatramin'ny 400 rupee. Izany no vola isam-bola amin'ny fotoana nanoratana ny fifanarahana tsy maintsy arahina amin'ny fanofana. Ny orinasa sasany dia mitaky vola amin'ny vola ary amin'ny vola Sri Lankan. Saingy ireo orinasa hafa dia mandray ny fandoavam-bola tsy misy vidiny ary ny dolara amerikana. Rehefa tapitra ny fivoahana dia haverina am-bola any amin'ny rupees any Sri Lankan ny vola.
Inona no tadiavina rehefa manofa
Ilaina ny manadihady tsara ny masinina amin'ny fotoana anaovana azy. Ankoatr'izay, ny rehetra dia mila manamarina - brakes, headlight, signal, menaka, fanapotehana, fametrahana rivotra, fikandrana herinaratra. Raha manam-potoana ianao dia tokony mitondra fiara fitiliana kely. Ny fahasimbana tsirairay dia tsy maintsy esorina amin'ny horonantsary sy sary, ary koa amin'ny fotoana fifaranan'ny fifanarahana, dia manondro ireo lesoka rehetra ao amin'ny takelaka maloto, izay tsy maintsy ampifandraisina amin'ny fifanarahana.
Manofa fiara miaraka amina mpamily. Sri lanka
Ho an'ny serivisy toy izany dia tsara kokoa ny mandeha any amin'ny masoivoho fitetezana. Ny biraon'ny masoivoho fitsangatsanganana dia misy any amin'ny faritra fivarotana rehetra ao Sri Lanka.
Ny vidin'ny fanofa-fiara miaraka amina mpamily iray dia 9 ka hatramin'ny 000 rupe isan'andro (arakaraka ny faharetan'ny fanofa).
Ny Toyota Prius eo anelanelan'ny 5 sy 10 taona dia misy Toyota, izay mpamily mahay teny anglisy.
Ny vidin'ny hofan-trano dia ahitana kilaometatra tsy voafetra, sakafo ho an'ny mpamily, fiantsonana ary solika. Azonao atao ny mampiady - matetika ny vidiny dia azo ahena amin'ny 10-15 isan-jato.
Ilaina ny fandoavam-bola mialoha (ekena amin'ny vola ihany), mitentina 30 isan-jaton'ny vidin'ny fanofana. Ny mpanjifa dia tsy maintsy mandoa ny vola sisa tavela amin'ny mpamily amin'ny faran'ny sefo. Azonao atao ny manetsika azy, fa izany, mazava ho azy, dia tsy ilaina.
Serivisy fanampiny rehefa manofa fiara ao Sri Lanka
Amin'ny famenoana ny fifanarahana amin'ny fanofa-trano, ianao dia manana fahafahana handidy fiantohana fanampiny, izay mampihena ny ahena amin'ny 0, fa mampitombo ny vidin'ny fanofaina amin'ny 1 ka hatramin'ny 500 rupe isan'andro. Raha toa ka mikasa ny handray sy / na hamerina ilay fiara tsy any amin'ny biraon'ny fiara ianao, dia horoahina aminao ny fiara amin'ny adiresy voafarinao fa mandoa 3 000 ka hatramin'ny 2 rupee. Raha te hanampy mpamily fanampiny amin'ny fampanofa-bola ianao dia tsy maintsy mandoa 000 ka hatramin'ny 9 isan'andro amin'izany. Ny seza fiara amin'ny zazakely dia mampisondrotra ny vidin'ny fiara amin'ny 000 andro amin'ny rupee 800-1.
Làlana any Sri Lanka. Kalitao
Tato ho ato dia nasiana làlana be kalitao avo lenta any Sri Lanka (avy amin'ny Bandaranaike Airport mankany Colombo, manomboka ao Colombo ka mankany Galle, sns).
Na izany aza, ny lalana tery tsy feno alahelo dia mandresy eto amin'ity firenena ity, ka manana làlana tokana amin'ny lafiny iray; any amin'ny toerana maro, dia tsy misy curbs. Na izany aza, amin'ireo lalan'ny mpizahatany, ny kalitaon'ny lalana dia azo leferina.
Misy famantarana marika, ny tsirairay amin'izy ireo dia misy fandikan-teny amin'ny teny anglisy, ary mazava foana ny fanamarihana eo amin'ny làlana.
Ny fantsona fotsy eo amoron-dàlana dia midika hoe fiatoana sy fijanonana fiara, ary tsipika mavo dia midika fa fandrarana.
Ny fiampitana mpandeha an-tongotra tsirairay dia asiana fantsom-bolongana mavo, ary tsipika eny an-dalana, manana zigzag endrika, miresaka ny hahatongavany.
Ny polisy fifamoivoizana any Lankan dia tsy mivadika amin'ireo vahiny eny an-dàlana, ary mamela heloka kely matetika. Ao an-tanàn-dehibe, dia mifehy ny fifamoivoizana eo amin'ny làlan-kianja izy ireo. Angamba ity farany dia noho ny tsy fitandreman'ny mpitondra fiara any Sri Lanka tanteraka ny jiro fifamoivoizana. Ary ivelan'ny tanàna, ny polisy zotram-piaramanidina Sri Lankan (toa anay) matetika dia mipetraka eny am-pihetsika, misambotra ireo mpandika fifamoivoizana.
Sazy any Shi Lanka
Ny tapakila haingana dia eo anelanelan'ny Rs 1. Ho an'ny famoahana mamo - 000 rupee. Ho an'ny fitsangatsanganana amin'ny hazavana mena - rupee 5. Na izany aza, amin'ny ankamaroan'ny tranga dia voavaha ilay fanontaniana hoe "Ahoana ny Mach?" Ary ny vola 000 8 rupees. Tsara kokoa raha manomana vola mialoha ihany ny vola ary aleo misaraka amin'ny ambiny volanao mba tsy hitaona ilay polisy, raha tsy izany dia mila vola bebe kokoa.
Azafady mba lazao ahy, azo atao ve ny manofa fiara miaraka amina mpamily, 08.02.2020 14.02.2020-6; olona minivan XNUMX. Vidiny? Dopa? Etc.
Ity misy ohatra iray amin'ny loharanom-pahalalana mety mahasoa anao:
http://srilanka.anilau.com/services/transport/avtomobil-ili-miniven-s-voditelem-v-arendu-5a8bf0d247e6b - 65 $ / andro
https://lanka-excursions.com/glavnaya2/transfer.html - $ 80 / andro miaraka amin'ny mpamily miteny anglisy iray.
https://fasttur.ru/car-rental-sri-lanka - $ 70 / andro miaraka amin'ny mpitari-dalana miteny anglisy (hanoro hevitra azy ireo izahay. Manana torolàlana amin'ny fiteny Rosiana koa izy ireo)
Aza atao koa ny manilika ireo olana miady hevitra, aza hadino ny mametraka ireto fanontaniana manaraka ireto momba ny orinasa manofa:
1. Inona ny fetran'ny fivezivezen'ny fiara isan'andro? (mazàna 100 km / andro)
2. Manao ahoana ny vidin'ny fandoavana ny mpamily raha misy hetsika taorian'ny 100km? (mazàna $ 0,4 isaky ny kilometatra)
3. Iza no tena, aiza, rahoviana ary amin'ny vola inona no mandoa solika?
4. Ohatrinona ny vidin'ny hetsika 20:00? (matetika amin'ny vidiny misaraka)
5. Iza no hikarakara ny fijanonana mandritra ny alina sy ny sakafon'ny mpamily, tafiditra ao amin'ny vidiny ve izany? (matetika matory ao anaty fiara fotsiny izy ireo)
6. Inona no hitranga amin'ny fanimbanan'ny fiara, ahoana ny fomba hamahan'ilay orinasa ny olana? (tsy tokony hifandraika aminao izany, satria misy mpamily)
7. Misy fandoavam-bidy misimisy ve amin'ny mpamily mandritra ny alina tsy mijanona eo ivelan'ny tanàna manofa? (matetika tsy)
8. Inona avy ny sarany fanampiny azo omena mihoatra ny haben'ny hofan-trano? (mazàna na tsia dia tsara kokoa ny milaza an'io)